गर्मीमा स्वास्थ्यको हेरचाह कसरी गर्ने ? – Sadarline
प्रदेश सभा सदस्य आरती पौडेलको संयोजकत्वमा संर्घष समिति
बाँकेमा आइतवार ५५ संक्रमित थपिए
सदरलाइन / डा. प्रकाश तिमिल्सेना
२६ चैत, नेपालगन्ज : हरेक बर्षझै यसपाली पनि गर्मी मौसमबाट बिरामी परेका सर्बसाधारणहरु अस्पतालमा आउन सुरु भइसकेको छ । दिनप्रतिदिन बिरामीहरुको चाप बढ्दै गएको छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा गएर हेर्ने हो भने त्यो देख्न पाईन्छ । यो क्रम अझै बढ्ने निश्चित छ । जति गर्मी बढ्यो उति बिरामीको चाप बढ्ने गरेको छ । केही हप्ता मात्र पर्खिने हो भने अस्पतालका कोलियाहरुमा समेत बिरामीलाई राखेर उपचार गर्नुपने अबस्था आउछ । यो मौसममा ज्वरो, झाडापखलाको समस्या भईरहन्छ । त्यस्ता बिरामीहरु धेरै आउछन् । यस्ता बिरामीहरुलाई सामान्य उपचार पछि पनि घर पठाईन्छ ।
सामान्य स्वास्थ्यसंस्थामा गएर उपचार गर्न पनि सकिन्छ । तर यि बाहेक गर्मीयाममा सबैभन्दा धेरै हुने अन्य जटिल खालका रोग भनेको मलेरिया, कालाज्वार, टाईफाईड, जन्डिस आदि रोगहरु हुन । यो मौसममा हुने अधिकांस रोगहरु सरुवा हुने गर्छन , सामान्य सजगता नअपनाउने हो भने प्रकोपको रुप लिन्छ । ज्वरो, झाडापखलालाई समेत हामीले सामान्य भन्न मिल्दैन जबकी यही मौसममा हुने जन्डिस, मलेरिया, कालाज्वरत झनै खतरनाक हुन्छन् । समयमै उपचार पाउन नसकेका बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्छ । रोग भनेको आफै अचानक आउने होइन । हाम्रो वरीपरीको वातावरणले रोग निम्त्याउछ । हाम्रो वातावरणले रोगको जन्म दिन्छ । सामान्य उदाहरण लामखुटेकै लिउ न, फोहोर व्यवस्थाप भएन, घरवरीपरी फोहार नै फोहोर भयो, खाल्डाखाल्डी भए त्यहां लामखुट्ेले घर
लामखुट्ेले त्यसपछि अनेक रोगको जन्म दिन्छ । त्यसकारण हामीले सबैभन्दा पहिले हाम्रो घर वरपरको वातावरणले अत्यन्त सफा र सुग्घर बनाउनुप¥यो । गर्मीयाममा त झन् यो कुरा अत्याबश्यक छ । घर वरपरको वातावरण सफा राख्ने हो भने धेरै प्रकारका रोगहरु त्यसै हराउछन् । अन्य कुराहरुमा गर्मीयाममा घाममा अनाबश्यकरुपमा हिड्डुल गर्नु भएन । हिड्नै परे सजगता अपपाउनुप¥यो । बासी खानेकुराहरु खानु भएन । पानीको मात्र प्रशस्तरुपमा सेवन गर्नुप¥यो । केही समस्या परिहालेमा तत्काल स्वास्थय संस्थामा गरे आबश्यक सरसल्लाह लिनुपर्छ । हो, केही बर्षअघि नेपालगन्जमा झाडापखलाको प्रकोप फैलिएर धेरैको ज्यान गयो । यस्तै कुरा अन्य ठाउमा पनि हुन्छ । एकातिर तराईक्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनका थुप्रै चुनौतीहरु छन् भने अर्कोतिर मौसमले पनि साथ दिदैन । खानेपानीका अबस्था कस्तो छ ? सबैलाई थाहै छ । मानव जिवनलाई स्वास्थ्य बनाई राख्न आबश्यक पर्ने कुराहरुकै बेमेल हुने गरेको ठाउमा बसेका हामीहरुलाई चुनौतीहरु त छन् तर फेरी त्यसलाई पार नगरी पनि सुःख छैन । चुनौतीसंगै अवसर पनि छन् । प्रशस्त मात्रामा स्वास्थ्य निकायहरु छन् उनीहरुकोमा गएर सल्लाह र सुझावहरु लिन सकिन्छ ।
जडिबुटीलाई करको भार
सदरलाइनडटकम २६ चैत, नेपालगन्ज : जडिबुटी निर्यातमा भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको छुट्ट्ैै ‘ट्रान्जिट परमिट’को मार खेप्दै आएका नेपाली जडिबुटी ब्यवसायीहरुले पछिल्लो समय भारतमा लागु भएको बस्तु तथा सेवा कर ९जिएसटी० समेत तिर्नुपरेको छ । थरीथरीका करहरु तिर्नुपरेका कारण करोडौको जडिबुटी ब्यवसाय मारमा परेको जडिबुटी ब्यवसायी संघ नेपालगन्जका अध्यक्ष याकुब अन्सारीले बताए […]
९ आश्विन २०७६, बिहीबार १८:१४
२० भाद्र २०७६, शुक्रबार १२:०३
१८ फाल्गुन २०७३, बुधबार १२:१७